I-10 yokuYila kunye nokuLula kwe-DIY Mask Craft imibono yabantwana - Umntwana
10 Imaski eLula yeDIY yokwenza iimbono zabantwana
Mhlawumbi ubunxibe iintlobo ezahlukeneyo zeemaski kwaye ukonwabele ukuzenza usemncinci. Ukuba umntwana wakho unomdla malunga neemaski, bazise kwi-DIY imaski yokwenza imibono yabantwana. Ukuzibandakanya ekwenzeni imaski ye-DIY yabantwana yindlela yokuba abantwana bakhulule icala labo lobuchule kwaye bazame izandla zabo ekwenzeni into enemveliso.
Kuba bonke abantwana bayakonwabela ukunxiba iimaski ezahlukeneyo, unokubakhuthaza ukuba benze imaski yeqhawe labo abalithandayo kwaye ubancede ngayo. Qhubeka uskrola njengoko sidwelisa imibono eyonwabisayo kunye nelula kakhulu yokuyila imaski ukuze wena nabantwana bakho nizame ekhaya.
Iimbono ezili-10 zeMask zoBugcisa zaBantwana:
Nazi iingcebiso ezilishumi zokwenza imaski abantwana bakho abanokuthi bazizame ekhaya:
1. IMaski yeBeaver:
Cela umntwana wakho ukuba afake umbala kwipleyiti yephepha kumthunzi omdaka.
Nceda umntwana wakho asike izangqa ezibini epleyitini kwinqanaba apho amehlo omntwana wakho aya kuba khona.
Ngoku cela umntwana wakho asike iimilo ezintathu zesangqa kwikhadibhodi emdaka kunye neemilo ezimbini zoxande kwikhadibhodi emhlophe okanye iphepha elishinyeneyo. Yenza imiphetho yeemilo zoxande zibengqukuva kancinci.
Vumela umntwana wakho ancamathelise iimilo ezimbini ezingqukuva emva kwepleyiti yephepha ukwenza iindlebe. Bacele ukuba bafake umbala kwisangqa sesithathu kumnyama kwaye bawuncamathelise ukwenza impumlo yebhere. Ncamathelisa iimilo zoxande ezantsi njengamazinyo.
Bopha umtya kumacala omabini emaski ukuze umntwana wakho ayinxibe.
[ Funda: Beaver Crafts Yabantwana ]
2. Imaski yamehlo ebhabhathane:
Nceda umntwana wakho asike i-butterfly silhouette njengoko kubonisiwe kumfanekiso. Qinisekisa ukuba ibanzi ngokwaneleyo ukugquma inxalenye yeliso lobuso bomntwana wakho.
Ngoku bacele ukuba bafake umbala kubuchule bemaski kuwo nawuphi na umbala abawunqwenelayo kwaye bawuhombise usebenzisa amatye anqabileyo, iintsiba kunye nezinye izinto.
Bopha intambo kumacala omabini ukunceda umntwana wakho ayinxibe.
3. IMaski yamehlo enentsiba:
Nceda umntwana wakho anqumle i-silhouette kwiqhekeza lekhadibhodi kwaye ayifake umbala kuwo nawuphi na umbala awunqwenelayo.
Bavumele ukuba bayihombise ngeentsiba ezahlukeneyo ngokuyincamathelisa ngeenxa zonke kwisiko lekhadibhodi.
Qhoboshela iintambo kumacala omabini ukuze umntwana wakho anxibe.
4. Imaski yobuso obonwabileyo nobulusizi:
Nceda umntwana wakho asike ubuso obupheleleyo kwikhadibhodi eshinyeneyo. Sika amaqhekeza kwindawo yeliso nomlomo.
Qinisekisa ukuba umntwana wakho wenza ubuso obunye njengobuso bomlomo obonwabileyo kunye nomnye njengobuso bomlomo olusizi.
Bacele ukuba bafake imibala kubuchule bemaski yabantwana ngepeyinti eyintsimbi ukuyinika inkangeleko emenyezelayo.
Bopha iintambo kuzo zozibini iziphelo ukuze umntwana wakho anxibe imaski yobuso.
5. Imaski kaSanta:
Cela abantwana bakho ukuba basike ikhadibhodi ngokobukhulu bobuso babo kwaye bayipeyinte ngombala obomvu.
Sika imingxuma ukuyilinganisa nendawo apho amehlo omntwana wakho aya kuba khona.
Bacele ukuba bancamathelise umqhaphu ukwenza iinwele kunye neendevu zikaSanta. Banokwenza amashiya besebenzisa umqhaphu.
Bopha iintambo kuzo zombini iziphelo ukunceda abantwana bakho banxibe imaski.
[ Funda: Imizobo yePhepha yaBantwana ]
6. Ingwe Entle:
Nceda umntwana wakho asike ikhadibhodi elingana nesiqingatha esingaphezulu sobuso bakhe.
Bancede bakhuphe imingxuma kwindawo yamehlo.
Ngoku vumela umntwana wakho ahombise imaski ngemibala e-orenji kunye nemnyama.
Bacele ukuba banqumle izangqa ezibini kwiikhadibhodi kwaye bazincamathelise ngasemva kobuso behlosi ukwenza iindlebe.
7. Isigqubuthelo sekati:
Nceda umntwana wakho asike imilo yeliso lekati kwifesi emnyama.
Maziqhoboshele iintsinga ezimhlophe empumlweni ukwenza amabhovu ekati.
Qhoboshela iintambo kuzo zozibini iziphelo ukunceda umntwana wakho anxibe imaski.
8. IiMaski zoMoya oMhle:
Cela umntwana wakho ukuba asike ezi milo yesiporho ephepheni kwaye ancede ukusika imingxuma yamehlo kunye nomlomo.
Zincamathelise kwiintonga ukwenza iimaski zobuso beentonga.
9. Iqela leMaski yezilwanyana:
Cela umntwana wakho ukuba asike iimilo ukusuka kumaphepha anemibala eyahlukeneyo kwaye uwasebenzise ukwenza imaski yamehlo efana nezilwanyana ezahlukeneyo.
Abantwana bakho banokusebenzisa izinto zokuhombisa ukongeza umntu owenziweyo kwiimaski.
[ Funda: Iphepha leMizobo yezilwanyana yaBantwana ]
10. IMaski ye-Clown ye-2D:
Sika imilo enkulu engqukuva kwiphepha elimhlophe kwaye usike imingxuma apho amehlo aya kuba khona.
Cela umntwana wakho ukuba ahombise ubuso beclown ngeepeni zokumakisha ngemibala eyahlukeneyo.
Yenza impumlo yeclown kunye nezihlathi ngokudibanisa iibhola zekotoni ezifakwe kumbala obomvu.
Khuthaza abantwana bakho ukuba benze le mizobo mihle neyonwabisayo yemaski ekhaya kwaye basebenzise ixesha labo lesimahla.
Bomama, zeziphi iimaski abantwana bakho abathanda ukuzinxiba okanye ukuzisebenzisa kakhulu?
Umtshato Trends Yonke Malunga Bollywood Iholide Costumes Gourmet Cookware And Accessories Windows And Doors
ingaba ikati ingawaphula umsila
Ngubani ifani yasebukhosini ifani
ingaba uya kuba ngumhlobo wam oyintombazana
Ngaba i-usps ihambisa ngeholide yekrisimesi
mdala kangakanani iqabaka umntu wekhephu
Wazi njani xa indoda yasemanzini ikuthanda